Ahoana no hanambady ny teny portiogey. Forum Portugal:"izay monina ao Portiogaly"
Ahoana no hanambady ny teny portiogey. Forum Portugal:»izay monina ao Portiogaly»
Tsara, tsy haiko izay holazaina. Anarana, araka ny teny portigey), tsara mpikarakara tokantrano, dia toa ahy fa manana matriarchy — ary afaka nandresy ny vadiny. Ankoatra izany, dia miankina amin’ny olona. vao haingana aho no nihaino ny fandresen-dahatra ny ankizivavy iray taona. Fa ny olona ao an-trano dia tsy ilaina — ny panties sy ba kiraro. Aoka izy ho velona ao an-trano, ary izy dia tonga mba hitsidika azy. Alexander, ao ny tontolo iainana be dia be ny tsy manam-bady Portiogaly, fa izy ireo dia tsy te-hanambady. Ao an-toerana ny tanora tsy hanelingelina ny fianakaviana ny fifandraisana. Kanefa, rehefa miresaka momba ny zava-misy fa ny trano dia tokony ho madio, foana aho fa ny vadiko mba hijery lehibe momba ny sakafo no olana iray hafa, ireo vehivavy mijery ahy raha toa ka mba hilaza ny kely indrindra, toy ny fahita firy, fa amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ahoana no very saina. Fa ny zavatra ny olona dia tsy mifanohitra amin’ny fivoriana amin’ny ho avy ho vady Breziliana na ny okrainiana ankizivavy.
Efa ho tanteraka ny miombon-kevitra i Svetlana, zanaky ny iray tampo amin’ny vadiny nandritra ny taona ny Fiarahana amin’ny lehilahy iray, ary efa ho velona aho, dia mahita ny ohatra izany, izay nofaritan’ny Svetlana. Tsy misy olona te-tsy misy andraikitra-tsy tahaka ny zavatra, dia nandositra haingana. Na ny vadiko aza dia nilaza tamiko, ary izy dia nilaza fa raha izaho no amin’ny teny portiogey, tsy nanao ny ny fifandraisana.
Dia inona tanora manantena
Manana ny fahatsapana fa ny zavatra izay lafiny izay afa-nandositra rehefa Portugal nanatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana. Tany am-piandohan’ity amin’ny teny portiogey ny fianakaviana dia avy eo anoloan ny ankizy amin’izao fotoana izao, vitsy ny olona te-hanome fanabeazana-vao androany ity lohahevitra ity no niadian-kevitra tany an-toerana ny hena shop
← Webcam Brezila amin'ny fotoana tena
Roulette mahafinaritra ny milalao. Amin'ny Chat roulette - toy izany koa ny tsara ho fantatra Chatroulette ny hany mba Breziliana →